SomaliTalk.com » tahriib
Home » Qoraallada Halkudhegga "tahriib"
Mid ka mid ah Dhalinyarada sida dirqiga uga samatabaxay masiiboyinkaasi Tahriibka mid kamida,ayaa waxa uu iiga sheekaynayaa dhibatadii aadka u xumayd ee uu soo maray intii uu Tahriibka kusoo jiray . Isaga oo sheekadii inoo wadana waxa uu yidhi:- Qaybtii 1aad ka akhi http://somalitalk.com/tag/aar/ Intiinii sheeka qaybtii hore la socotay waxa ay inoo maraysay aniga oo Magaladii Burco wixii aan dhaqale...
Halkudheg: aar, tahriib
55 Qof oo Tahriib ah ayaa Looga cabsi Qabaa in ay ku Qaraqmeen Badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Yemen
55 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ayaa ku qaraqmay ama la la’yahay kaddib marki Talaadadii la soo dhaafay doontii ay saarnaayeen ay ku degtey badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Yemen, arrintaas oo dhacdadii ugu xumayd oo muddo sanad ah ka dhacdaa halkaas, sidaas waxaa yiri Qaramada Midoobey. Qaramada Midoobay waxay sheegeen in ay arrintani tahay “Dhacdadii ugu weyneynad ee lagu...
Tirada Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku jirta Xabsiyada Libya oo kor u kacday
(Tripoli):- Qunsulka Safaaradda Soomaalida ee dalka Libya Md.Muxyaddiin M.Kaalmoy, ayaa shalay(5/5/2012) 10 Muhaajiriin Soomaali ah,ka soo daayay Xabsi KMG ah oo ku yaalla Degmada ‘Nasma’ oo 200 km.xagga koonfurta kaga aaddan Tripoli. Muhaajiriintan oo kala ahaa 5 rag ah iyo 5 dumar ah, ayaa muddo lagu hayay degmadaas, ka-gadaal markii ay rag kuwa wax tahriibiya ah ku soo daadiyeen,...
Halkudheg: Liibiya, tahriib
Tahriibayaal Soomaaliyeed kuwii ugu badnaa oo laga sii daayay Xabsiga ‘Garyaan’ ee Libya
(Taripoli):-Tahriibayaal Soomaaliyeed, oo wada Dhallinyaro ahaa, ayaa maanta(12/04/2012) laga sii daayay Xabsiga weyn ee ‘Garyaan’ oo 70 km. xagga Koonfureed kaga aaddan Magaalada Tripoli ee dalka Libya. Halkan ka daawo sawirada Tahriibayaashan, oo in muddo ah ku jiray Xabsigan, ayay tiradoodu ahayd 266 qof, oo isugu jiray 76 dumar ah iyo 190 rag ah. Muhaajiriintan ayaa badankood...
Tahriibayaal Soomaaliyeed oo qaar Badda ku dhinteen intii kalena loo soo gacan-geliyay Ciidanka Ammaanka ee Libya
Magacyada Tahriibayaal Soomaaliyeed oo ku dhintay Badda u dhexaysa Liibiya iyo Talyaaniga – (Tripoli):- Doonni kuwa Tahriibka ah, oo ay la socdeen 60 Muhaajiriin Soomaali ah, oo 1-dii bishan April 2012 ka shiraacatay Xeebaha Libya, ayaa dib loogu soo celiyay Tripoli, iyadoo ay 7 ka mid ahaa Tahriibayaashiina ay Badda ku soo dhinteen. Sii Akhri Read More →
Warar ku saabsan Tahriibayaal Soomaali ah oo si Xun loola Dhaqmey ka dib markii lagu Gubey Gaarigii ay Saarnaayeen
Wararka naga soo gaaraya Dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay Geeryoodeen Shan iyo Labaatan Tahriibayaal Soomaali ah oo ku soo jeeday Dalka Liibiya.Tahriibayaashan ayaa ka soo gudbayay lama Degaanka u dhaxeeya Dalalka Suuddaan iyo Liibiya kuwaasoo doonayay in si dhuumashaal ah ay ku galaan Dalka Liibiya. Tahriibayaashan Soomaalida ah ayaa isugu jiray Rag iyo Dumar iyo waliba Caruur kuwaasoo si sharci...